I-Netherhurst Cottage, indawo enhle ngokumangazayo - I-Airbnb
I-Netherhurst Cottage, indawo enhle ngokumangazayo
Le Cottage yetshe ethokomele ehlotshiswe kahle isethwe ngaphakathi kwabanikazi bezindawo ezinhle nezingadi. Izungezwe ngokuphelele indawo emangalisa kakhulu ye-Hope Valley ebabazekayo, enkabeni yepaki yesizwe yasePeak District.
Ikotishi elikhanyayo nelinomoya lihlotshiswe kahle futhi linezici ezinhle njengemishayo eveziwe kanye nezitebhisi ezivunguzayo. Ngaphandle kwemigwaqo eminingi yasendaweni okufanele ibe nayo, kunokuqashwa kwamabhayisikili kanye nedamu lokubhukuda elivulekile imizuzu nje ukusuka lapho.
Indawo yaleli kotishi elihle iyamangalisa futhi idonsa umoya.
Kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle edolobhaneni lendawo laseHathersage, kanye nezindawo zobumnandi ezimbalwa, izitolo ezinkulu ezi-2 kanye nesiteshi sikaphethiloli. Kukhona nesiteshi sesitimela kanye nedamu lokubhukuda lomphakathi elingaphandle.
I love my garden and spend most days pottering and maintaining the grounds. I hope my guests will appreciate and respect their environment
Ngihlala emagcekeni ngakho ngiyatholakala uma unezinkinga kodwa uzonikezwa ubumfihlo obuphelele ngesikhathi uhlala